Tranon'i Castletown - IntoKildare
Castletown, izay trano voalohany sy lehibe indrindra any Palladian, any Irlanda, dia ampahany manan-danja amin'ny lova arisman'i Irlandy. Gaga amin'ny tranobe mahafinaritra sy mandany fotoana hijerena ireo valan-javaboary tamin'ny taonjato faha-18.
Natsangana teo anelanelan'ny 1722 sy c.1729 ho an'i William Conolly, filohan'ny House of Commons any Irlandy, Castletown House dia natao hanehoana ny fahefan'ny tompony ary ho toerana fialamboly politika amin'ny sehatra marobe.
Ny fitsangatsanganana an-tariby sy fitarihan-tena ao an-trano dia misy ary misy hetsika ara-pianakaviana marobe mandritra ny taona.
Ny valan-javaboary namboarina tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo namboarina dia misokatra isan'andro isan'andro mandritra ny taona. Tsy misy sarany fidirana an-tongotra sy hijerena ireo valan-javaboary. Tongasoa ny alika, saingy tsy maintsy tazomina amin'ny firaka ary tsy avela ao amin'ny farihy, satria misy fiompiana bibidia.
Tsiambaratelo iray eo an-toerana: Castletown House's Biodiversity Garden no toerana mety hitondrana ankizy. Miaraka amin'ny lalan-tsambatra mahafinaritra sy fanabeazana, faritra filalaovana ary be dia be hitrandrahana, dia hanintona ireo mpitsidika tanora sy tsy dia tanora loatra!
Lova sy tantara, Outdoors, Trano sy zaridaina, Mandeha an-tongotra sy mandeha an-tongotra, Natiora sy Biby, Zavatra maimaim-poana hatao, Celbridge
Celbridge, County Kildare, Irlandy.
Alakamisy - Masoandro: 10 maraina ka hatramin'ny 5 hariva
Ho an'ny fotoana fitsangatsanganana sy fiampangana fidirana dia jereo ny tranokala. Fidirana maimaimpoana amin'ireo valan-javaboary tamin'ny taonjato faha-18 tafaverina amin'ny laoniny, misokatra isan'andro mandritra ny taona.